Ah, Soisa, firenena tsara sy milamina mipetraka tsara eo anelanelany Italia, Frantsa, ary Alemaina. Ilaina ny fitsidihana raha hijery ny antony manisa hatrany an'i Suisse ho iray amin'ireo firenena sambatra indrindra eto an-tany. Ka ahoana ny hevitrao ny rehefa mieritreritra 'Soisa '? Mihevitra aho tampon-tampon'ny oram-panala, fromazy, ary ny sôkôla. Hisy be ny fotoana sy ny sôkôla fondue amin'ny Swiss vacay, fa ho azo antoka mba hampidirana ny ara-kolontsaina rehetra, voajanahary, ary ara-tantara Zava-nisongadina ity firenena ity tsy maintsy atolotra. Avy amin'ny Epic mitaingina fiaran-dalamby sy ny tendrombohitra treks ny valanoranony-nandatsaka maritrano, Soisa manana zavatra mba hanolotra karazana rehetra dia lavitra mandritra ny vanim-potoana rehetra. Ndeha horavako ny sasany amin'ireo tsy maintsy-de los noho ny nankany Soisa.
Zohy lehibe io dia manana farihy ary fanasana efitrano ao anatiny izay afaka tena handraisana about 400 ny olona ka nanofa ho an'ny zava-mitranga toy ny buffet fiaraha-misakafo, antoko, sy ny fampakaram-bady. Events any mampiseho DJs, mpandihy, sy ny mpitendry mozika. Afaka maka tantara fiaran-dalamby avy any Vitznau ho toerana tsy manam-paharoa. Ny vohikala ihany alemaina, fa azonao atao ny mampiasa Google Chrome hijerena ireo tranonkala miteny vahiny raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny dia - azonao atao ny mamadika ilay fandikan-teny mandeha ho azy!
Tanàna lehibe rehetra dia manana tantara na tranombakoka siantifika izay mahatalanjona vaky ny tanàna sy orambe. Na izany aza, toerana sasany efa tena tsy manam-paharoa tranombakoka fotsiny fa tsy tokony ho hita. Ny olona avy avy amin'izao tontolo izao mba hitsidika ny H.R. Geiger tranom-bakoka in Gruyere.
Fondue dia iray amin'ireo sakafo malaza indrindra ho avy any Soisa, ary izany no tsy misy loza. Ny olona no mihinana tain fromazy avy amin'ny vilany kaominaly nandritra ny taonjato maro ao amin'ny andrefana miteny frantsay anisan'ny Soisa. Na izany aza, ao amin'ny taona 1930 Soisa Fromazy Union marketed mahery vaika izany lovia na amin'ny firenena sy iraisam-pirenena, manambara azy ho lovia nasionaly any Suisse ho fomba iray hivarotana ny fihoaran'ny firenena fromazy. Ary izahay dia faly izy ireo dia, izay tsy tia ketraka fromazy sy ny mofo? Mpivady ny fondue amin'ny maina divay fotsy, ary alao antoka fa tsy handroboka indroa ianao!
tonga ny fotoana ho an'ny tena antony andehananao any Suisse – ny sôkôla! Soisa dia tena malaza noho ny sôkôla, ary afaka mahita sôkôlazy lafo vidy marobe eny an-joron-dalambe eny rehetra eny amin'ny firenena ianao, na izany aza, Zurich no nalaza noho ny sôkôla maro Tours. Misy fitsangatsanganana sôkôla mifanaraka amin'ny teti-bola rehetra! Afaka mandray ny asabotsy ianao fitsangatsanganana an-tongotra maraina izay manambatra ny fisongadinan'ny tanàna amin'ireo sôkôla tsara indrindra eto an-tanàna. Azonao andramana maka nitety ny sôkôla kely orinasa, ary traikefa manao anao manokana Baran-tsokola. Fa ny tena asa fahavaratra tarehy, maka sôkôla fitsidihana sambo ny Lindt sy Sprungli orinasa.
Ok, ankehitriny, fa efa feno ka sôkôla sy ny fromazy, tonga ny fotoana mba hahazoana mandroso indray! Soisa tendrombohitra dia tsy ho an'ny ririnina tia manao ski ambony! Misy mahatalanjona fahavaratra fiakaran'ny fa afaka mandeha manodidina ny firenena, fa ny faritra Jungfrau tokony ho avo ka eo amin'ny siny lisitry. Ny Jungfraujoch no avo indrindra any Eoropa amin'ny 3,454 metatra (~ 11.330 feet) ary ny fomba fijery tsy tokony ho hita. Misy lalamby izay hitondra anao any mandritra ny taona raha tsy mpandehandeha be ianao, na ianao mandritra ny ririnina mitsidika. Raha toa ianao ka ho an'ny zava-tsarotra jereo ny sasany amin'ireo lalana any amin'ny faritra. Maro ny lalana manana sakafo sy zava-pisotro tsara orinasa teny an-dalana, koa aza manahy, ianao dia tsy mila lava volo izany!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary omeo anay fotsiny ny voninahitra amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-experiences-switzerland-winter-summer%2F%3Flang%3Dmg - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)